Lufthansa inotangazve yayo yekutanga North America neAsia nendege kubva kuMunich Airport
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Germany Kuputsa Nhau » Lufthansa inotangazve yayo yekutanga North America neAsia nendege kubva kuMunich Airport
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Germany Kuputsa Nhau • Investments • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • Tourism Kutaura • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Sezvo indasitiri yekushanya yepasirese iri kudzoka kumatanho epamberi pechiitiko, Lufthansa iri kusimbisa mabasa ayo ekutanga kubva kuMunich Airport uye ichapa zvakare Kirasi Yekutanga munzira dzakasarudzwa.
Lufthansa iri kumutsidzira mashanu eAirbus A340-600 inopa Yekutanga Kirasi.
Lufthansa Airbus A350-900s yekupa Kirasi Yekutanga senge yezhizha 2023.
Kutanga muzhizha 2022, iyo A340-600 ichabhururuka kubva kuMunich kunyanya kuenda kuNorth America nekuAsia.
Munich Airport ndiyo chete ye5-nyeredzi hub yeEurope kwemakore uye inozivikanwa pakati pevatakuri veLufthansa, pasirese, kwete chete senzira yekuBavaria, asi seinotungamira, nhandare yendege inopa rwendo runokurudzira.
Zvino sezvo indasitiri yekufambisa yepasirese iri kudzoka kumatanho epamberi pechiitiko Lufthansa iri kusimbisa ayo ekutanga masevhisi kubva Munich Airport uye zvakare ichapa Chekutanga Kirasi panzira dzakasarudzwa. Izvi zvinoreva kuti, Lufthansa iri kumutsidzira kwechinguvana maAirbus marefu kutakura ndege A340-600 ine makirasi mana ekubhururuka, kusanganisira mubairo unohwina Kirasi yekutanga nezvigaro zvisere.
Kutanga muzhizha 2022, iyo A340-600 ichabhururuka kubva kuMunich kunyanya kuenda kuNorth America nekuAsia. Sarudzo yekumisazve idzi ndege inokonzerwa nekukura kweprimary kudiwa, kune bhizinesi pamwe nekufamba kwekuzorora.
Mukupera kwezhizha 2023, iyo yekutanga Airbus A350-900, ichipa Chekutanga Kirasi, ichabatana nezvikepe uye kusimuka kubva kuMunich, ichisimbisa mupiro wekutanga kuLufthansa's 5-star hub.
Denda risati ratanga, Lufthansa Airbus A340-600 ngarava dzaive nendege gumi nenomwe, gumi nembiri dziri kutengeswa. Dzimwe ndege shanu parizvino hadzisi kutengeswa uye dzichamutsiridzwa kwenguva pfupi uye dzichizotengeswa mune rinotevera zuva.
Lufthansa inoenderera mberi nekudyara mukuvandudzwa kwezvikepe zvayo. Uyu Mbudzi wapfuura, Boka rakatenga gumi dzekuwedzera mamiriro-e-iyo-ndege-refu-kutakura ndege: shanu Boeing 10-787s uye mashanu A900-350s. Iwo ekutanga achange achishanda munguva ino yechando. Mugore rino chete, Lufthansa iri kutora kuendesa mwedzi wega wega, itsva-inoshanda ndege yeAirbus kubva kumhuri yeA900neo. Kuunzwa kwendege makumi mashanu nenomwe ndege dzeAirbus A320neo dzakarongwa kusvika muna 107.